Sonos Ayaa Soo Bandhigay Qalab Bedelaya Baytariga Oo Loogu Talagalay Sonos dhaqaaq | War gadget
Sonos ayaa soo bandhigtay qalab batteriga loogu badalayo Sonos Move
Paco L Gutierrez | | Afayeenada, Qalabka
Maalmo ka hor sumcadda caanka ah ee loo yaqaan 'Sonos' ayaa soo bandhigtay wax ka farxiyay dhammaan macaamiisheeda aad u faraxsan, qaarkood Qalabka batteriga bedelida kuwa ku hadla Sonos Move oo aad u fiican. Waa xirmo si fudud loo rakibo taas oo isla markiiba xallin doonta dhibaatooyinka batteriga ee suurtagalka ah ee aan wadno. Tani caadi ahaan caadi maaha marka loo eego kuwa ku hadla wireless-ka, laakiin xaaladda Sonos qiimaheeda caadi ma ahan. Marka kuwa maalgeliya lacagtooda waxay qadarin doonaan awood u siinta inay kordhiyaan nolosha qalabkooda.
Qalabkani wuxuu ka kooban yahay wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u beddesho batteriga iyada oo aan loo baahnayn qalab kale oo dheeri ah, sidaa darteed qof walbaa wuu awoodi doonaa inuu ku sameeyo dhibaato la'aan. Xirmada waxaan ka helnay shay aad ugu eg gitaarka oo aan kor ugu qaadi karno daboolka difaaca, nooc ka mid ah T oo naga caawin doona inaan furno boolal, 2 boolal dheeri ah iyo macquul ahaan baytariga oo leh awood la mid ah ta asalka ah.
Batariga si loo kordhiyo nolosha Sonos Move
Sonos ayaa sii daayay xirmadan bedelka oo ah € 79 waxaana lagu heli karaa isla midabada ay ku siiso Sonos Move wireless wireless. On your website rasmi ah waxaan arki doonaa buugaaga oo dhan kaas oo xirmada bedelka batariga horay loogu soo lifaaqay. Xusuusnow in rarka qalabkan beddelka ahi gebi ahaanba ka xor yahay dukaankiisa rasmiga ah. Muhiimadda warkan waa mid aad u weyn, maadaama ay jireen isticmaaleyaal badan oo sheeganayay batteriga iyagoo arkaya hoos u dhac ku yimid kii gudaha ka soo gaaray, waa wax ku dhaca dhammaan aaladaha, gaar ahaan taleefoonnada casriga ah.
Bateriga wuxuu si sax ah u leeyahay qeexitaannada asalka ah, oo leh madax-bannaanida 11h taas oo in badan ku xirnaan doonta mugga, heerkulka ama masaafada aaladda sii deynta, shaki la'aan war weyn. Haddii aad rabto inaad aragto falanqayntayada qotada dheer ee Sonos Move, dhagsii xiriiriyahan, halkaas oo aan si fiican ugu tijaabinay.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Qalabka » Sonos ayaa soo bandhigtay qalab batteriga loogu badalayo Sonos Move
Shirarka fiidiyowga ee gen-ka ee ka socda Logitech Rally Bar
Qalabka garaaca wadnaha ee 'Pulse 3D', PS5 ayaa sidoo kale si weyn u beddelay [Dib u eegis]